Ufuna ubulungiswa owasolwa ngokudlwengula umzukulu | News24
Ufuna ubulungiswa owasolwa ngokudlwengula umzukulu
UFUNA kugezeke igama lakhe emphakathini umlisa waseMgungundlovu obebhekene necala lokudlwengula umzukulu wakhe oneminyaka eyisikhombisa kodwa labuye lahoxiswa.
Lomlisa igama lakhe esiligodlile ukuvikela ingane uthi selokhu abekwa lelicala isithunzi sakhe sidicileke phansi emphakathini waze walahlekelwa nawumsebenzi abeziphilisa ngawo.
Ekhuluma ne-Maritzburg Echo uthe izinkinga zakhe ziqale ngo-Febhruwari ngonyaka ka 2016 kade kufika osonhlalakahle emzini wakhe.
“Usonhlalakahle wafika wathi uze ngengane asethole imibiko yokuthi iyahlukumezeka. Kwasixaka lokhu sinogogo wengane ngoba thina besazi ukuthi ihleli kahle futhi nasesikoleni iqhuba kahle. Sathi uma simbuza losonhlalakahle ukuthi lezinsolo zivelaphi wathi uthole umbiko komunye womakhelwane kodwa wanqaba ukumgagula ngegama.”
Uthi losonhlalakahle wathi uzoyithatha ingane ukuze iyohlolwa kepha yena wenqaba.
“Ngamtshela ukuthi ayikho ingane azoyithatha ngoba mina ngokwazi kwami uma udaba lubucayi kanjalo kufanele afike namaphoyisa. Wabe esehamba wanyamalala izinyanga ezimbili.”
Uthi ngenyanga kaMeyi losonhlakahle waphinde wabuya futhi esezolanda ingane.
“Uma ebuya wayesehambisana namadoda amane bethi bazolanda ingane. Ngalelolanga ngangingekho ngisetohweni bafica ugogo wayo ingane nayo. Wathi uma ethi usayobheka umama wayo ingane khona ezokwazi ukuthi ingane ihambile wabuya sebehambile bashaya bachitha nengane.”
Uthi wathi uma ebuya emsebenzini wafica ingane ingasekho kuthiwa ithathwe osonhlalakahle.
“Lokho kwangidina kakhulu ngoba bayithatha sakuyintshontsha kungekho umuntu walapha ekhaya obanike lelogunya. Ngahamba ngaya emaphoyiseni ngiyobika afike aqinisekisa ukuthi abephelezele abezenhlalakahle kuzolandwa ingane ngoba mina ngiyalwa.”
Uthi wathi uma efonela osonhlalakahle okunguyena owayephenya lelicala lokuhlukumeza ngokocansi wamtshela ukuthi akavumelekile ukuyibona ingane.
“Wasitshela ukuthi asivumelekile ukuyibona ingane noma sisondele eduze kwayo. Wathi kumina ngisazophenywa ngoba ingane ihloliwe kwatholakala ukuthi yoniwe. Wathi ngeke siyibone kuze kube kuphela uphenyo.”
Uthi ngoJulayi wonyaka owedlule amaphoyisa angena ngesankahlu emzini wakhe entathakusa elengise izibhamu ezombopha.
“Bathi ngihlukumeza izingane base bengithatha icala lavulwa emaphoyiseni aku Loop Street. Ngakwazi ukuthi ngithole ibheyili enkantolo kodwa yanquma ukuthi icala lami lidluliselwe enkantolo yamajaji ngoba libucayi.”
Uthi icala lakhe laphinde labuyiselwa enkantolo kamantshi nokuyilapho lafike lahoxa khona.
“Ngaphambi nje kokuqulwa kwecala ngathathwa amagazi ukuze kutholwe ukuthi uketshezi olwatholakala enganeni luyamesha yini. Kuze kube manje angikaze ngitshelwe ukuthi leyomiphumela yathini futhi akekho nowangitshela ukuthi kungani icala lahoxiswa.”
Uthi okunye okumphatha kabi ukuthi sekuyophela izinyanga ezilishumi engamazi umzukulu wakhe ukuthi ulaphi.
“Siyayithanda kakhulu lengane futhi siyayikhumbula. Asazi nokuthi ikuziphi izinkalo njengoba yavele yashaqwa nje. Ngisho sidla ukudla kwehla kabuhlungu ngoba asazi ukuthi yena umzukulu ulala edleni nokuthi ugqokani njengoba zonke izimpahla zakhe zilapha.”
Eqhuba uthe lesigameko sesimenze wabukeka kabi emphakathini.
“Angisakwazi ngisho ukuthola amatoho emzini yabantu, ngidume kabi ngokuba umuntu ocuthela izingane azidlwengule. Isithunzi sami sidicilelwe phansi futhi ngeke ngiphinde ngiqashwe ndawo,” kusho yena.